Ɔbohene a Ɛsom Boɔ
Ɔbohene a Ɛsom Boɔ yɛ nwoma a ɛdi mu, ɛmu nyiyimu a ɛfa gyedie ne nkyerɛkyerɛ ho nsɛm bebree a ɛho hia wɔ Yesu Kristo Asɔre a Ɛwɔ hɔ ma Nna a Ɛdi Akyire Ahoteɛfoɔ. Nkɔmhyɛni Joseph Smith na ɔkyerɛɛ saa nneɛma yi ase de puee dwa so, na wɔtintimm no wɔ Asɔre no dawurubɔ krataa a na ɛwɔ hɔ wɔ ne berɛ so.
Onyankopɔn yi Ne ho adi kyerɛ Mose—Wɔsakyera Mose—Satan ne no di asie—Mose hunu wiase pii a nnipa tete so—Ɔbabarima no bɔɔ wiase a ɛnni ano—Onyankopɔn adwuma ne n’animuonyam ne sɛ Ɔbɛma onipa ɛnnwuo tebea ne nkwa a ɛnni awieɛ.
Onyankopɔn bɔ ɔsorosoro ne asase—Wɔbɔ deɛ ɛteaseɛ nyina ara—Onyankopɔn bɔ onipa na ɔma no tumi wɔ biribiara so.
Onyankopɔn bɔɔ nneɛma nyina ara honhom mu ansa na ɛreba honam mu wɔ asase so—Ɔbɔɔ onipa, honam a ɔdi kan, wɔ asase so—Ɔbaa yɛ ɔbarima nsɛsoɔ boafoɔ.
Sɛdeɛ Satan bɛyɛɛ ɔbonsam—Ɔsɔ Hawa hwɛ—Adam ne Hawa hwe ase, na owuo ba wiase.
Adam ne Hawa wo mma—Adam bɔ afɔdeɛ na ɔsom Onyankopɔn—Wɔwo Kain ne Habel—Kain te atua, ɔdɔ Satan sene Onyankopɔn, na ɔbɛyɛ Ɔyeraba—Awudie ne atirimuɔdensɛm trɛ—Wɔka asɛmpa no firi ahyɛaseɛ no.
Adam asefoɔ kora nkaeɛ nwoma—N’asefoɔ a wɔtene ka nsakyeraeɛ ho asɛm—Onyankopɔn yi Ne ho adi kyerɛ Henok—Henok ka asɛmpa no—Wɔdaa nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ no adi kyerɛɛ Adam—Ɔnyaa asubɔ ne asɔfodie no.
Henok kyerɛkyerɛ nkorɔfoɔ no, di wɔn anim, na ɔtutu mmepɔ—Wɔkyekyere Sion ahenkuro no—Henok hunu Onipa Ba no mmaeɛ sie, Ne mpata afɔrebɔ, ne ahoteɛfoɔ no wusɔreɛ—Ɔhunu Sion Mmaeɛ bio no sie, n’Anoboaboa, Mmaeɛ a Ɛtɔ so Mmienu no, ne Sion akyirisan no.
Metusala hyɛ nkɔm—Noa ne ne mma mmarima ka asɛmpa no—Atirimuɔdensɛm kɛseɛ hyeta—Wɔnntie nsakyeraeɛ ho frɛ no—Onyankopɔn hyɛ sɛ wɔbɛsɛe honam nyina ara wɔ Nsuyire no mu.
Abraham hwehwɛ agya panin nhyehyɛeɛ nhyira—Asɔfoɔ atorɔfoɔ taataa no wɔ Kaldea—Yehowa gye no nkwa—wɔka Misraim farebae ne n’amammuo ho asɛm bio.
Abraham firi Ur kɔ Kanaan—Yehowa yi ne ho adi kyerɛ no wɔ Haran—Wɔde asɛmpa no ho nhyira nyina ara hyɛ n’asefoɔ bɔ na ɛnam n’asefoɔ so ɛbɛkɔ obiara hɔ—Ɔkɔ Kanaan na ɔtoa so kɔ Misraim.
Abraham nam Urim ne Tumim no so sua adeɛ fa owia, ɔsrane ne nsoromma ho—Awurade da ahonhom ho su a ɛnni awieɛ adi kyerɛ no—Ɔsua adeɛ fa wiase asetena a ɛdi kan, nyi-nto-hɔ, adebɔ, Ɔgyefoɔ no yie, ne onipa tebea a ɛtɔ so mmienu no ho.
Anyame no hyehyɛ asase no ne deɛ ɛwɔ nkwa wɔ so nyina ara adebɔ—wɔda nhyehyɛeɛ a ɛfa nna nsia adebɔ no adi.
Anyame no wie Wɔn nhyehyɛeɛ a ɛfa nneɛma nyina ara bɔ no ho—Wɔma Abɔdeɛ no ba mu sɛdeɛ Wɔn nhyehyɛeɛ teɛ—Adam to abɔdeɛ a ɛte ase biara din.
Nhwɛsoɔ Pɛpɛɛpɛ 1
Nhwɛsoɔ Pɛpɛɛpɛ 2
Nhwɛsoɔ Pɛpɛɛpɛ 3
Yesu hyɛ Yerusalem sɛeɛ a ɛrebobɔ ba no ho nkɔm kyerɛ—Ɔsan nso kasa fa Onipa Ba no Mmaeɛ a Ɛtɔ so Mmienu, ne atirimuɔdenfoɔ sɛeɛ no ho.
Joseph Smith kyerɛ n’anatoɔ, n’abusuafoɔ, ne wɔn atenaeɛ kane no—Nhanyan soronko ɛfa nyamesom ho nya nkɛtɛnsoɔ wɔ New York atɔeɛ fam so—Ɔsi nkete sɛ ɔbɛhwehwɛ nyansa sɛdeɛ Yakobo kyerɛ no—Agya no ne Ɔba no yi wɔn ho adi, na wɔfrɛ Joseph kɔ ne nkɔmhyɛ nyamedwuma no mu. (Nkyekyɛmu 1–20.)
Yɛgye Onyankopɔn, Ɔnniawieɛ Agya no, ne Ne Ba, Yesu Kristo, ne Sunsum Kronkron no di.